Aqoonta Common - Hangzhou DryAir Daaweynta Co., Ltd
Leexo-key System Room qallalan
nidaamka laga Nusqaaminayn Vocational
nidaamka dib u soo kabashada NMP
Mabaadi'da shaqo Dryair Products
1. Qaboojinta dehumidification
hawada waxaa la qaboojiyey in ay hoos dhibic sayaxa, ka dibna biyaha waxaysidoo waa lagaa saarayaa.
Habkani waa waxtar leh ka yar shardi ah in hal dhibic sayaxa waa 8 ~ 10 ℃ ama in ka badan.
2. riixo dehumidification
cadaadi ku tiinbiyo oo hawada qoyan ay u kala soocaan qoyaanka.
Habkani waa wax ku ool ah marka mugga dabaysha waa yar yahay, laakiin ma ku haboon xaaladaha mugga dabayl weyn.
3. Liquid dehumidification nuugista
chloride Lithium buufiyo xal loo isticmaalo si uu u nuugo qoyaan.
Dhibic sayaxa waa la dhimi karaa in ay -20 ℃ ama si, laakiin qalabka waa ballaadhan yahay, iyo dareeraha nuugo waa in la beddalo.
Nooca-4.Wheel desiccant dehumidification
The fiiloyin dhoobada wakiilada hygroscopic furan cufay waxaa la galay kaalinta labaad awlallada malabka oo kale hawo.
Qaab dhismeedka dehumidification waa mid fudud, oo ay gaari karaan -60 ℃ ama ka yar iyada oo loo marayo isku dhafka gaarka ah ee dhibcood dharab.
Tani waa habka ay isticmaalaan Jierui.
NMP u taagan yahay N-methyl-2-Pyrrolidone
Tan iyo NMP ayaa dhibic karaya sare iyo cadaadiska uumiga hooseeyo hoos heerkulka caadiga ah, waxaa si fudud loo aruurshey karo by qaboojinta hoos heerkulka caadiga ah. Sida laga soo xigtay formula ee Antoine, Iyada oo la adeegsanayo ay dabeecad u, soo kabashada ee NMP la fulin karaa by qaboojinta (in lacagta dib u soo kabashada biyo aad u korodho haddii gaaska dhammayn qalajiyaha ku jira biyo dheeraad ah).
Faa'iidada of rotors fiirsashada Vocational:
waxqabadka 1.High & oolnimada
Isticmaalka zeolites silica High iyo carbons shaqeysiin leh awoodda adsorption weyn u ogolaanaya our VOCconcentrator si furfurmi daaweeyo noocyada kala duwan ee VOCs iyo shaqeeyaan xaalado kala duwan oo qalliin.
2.Capability ee daaweynta VOCs dhibic karaya sare
wax Carbon dhibaato ah in lagu daweeyo VOCs dhibic karaya sare sababtoo ah halka ay xadka heerkulka desorption. Taas bedelkeeda, dabeecadaha rotors zeolite yihiin iska caabin kulaylka guban iyo sare, kaas oo awood u ururiye Vocational our si ay u isticmaalaan hawada adsorption la heerkulka sare.
Vocational si fudud polymerized by tamarta kulaylka (tusaale styrene, cyclohexanone, iwm) waxaa lagu daaweyn karaa wax ku ool ah by zeolite High-silica.
4.Cleanability & dardargelinta by daaweyn kulaylka gaar ah
rotors zeolite Our geedi socodka calcining u yimaadeen inay dhammaan waxyaabaha ay ka mid yihiin ka imanba koolo. Urka in element rotor laga yaabaa in ay dhacaan muddo qaar ka mid ah use.But ka dib, ha ka welwelin !! rotor waa la dhaqi karo hab sax ah in meesha laga saaro ururtay dust.It ayaa ka sii fiican in rotor zeolite noo soo nooleeyey karo by daaweyn kulaylka sida ay xaaladaha.
Codsiyada caadiga ah ee rotors fiirsashada Vocational:
Suurto gal ku xiran Xarunta line Product / inay gacanta ku VOCs
VOCs loola dhaqmo
Automotive / Qaybo ka soo saaraha waab rinjiyeynta Toluene, Xylene, Esters, alcohols
alaabta guriga Steel gaare Rinjiyaynta waab, foornada
Koolo / soo saaraha cajalad magnetic habka daahan, unit Nadiifinta Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, iwm
kiimikooyinka Warshad Oil, nuclear- Consort leedahay beduliyum, acids Organic, Aldehydes, alcohols
cusbi dardaro / Kan sameeyey Glue Balaastigga, habka wax soo saarka plywood Styrene, Aldehydes, Esters
Semi-kaari unit nadiifinta Alcohols, Ketone, Amines
miiska sayaxa diinta barta Faa'iido leh:
-37 0,11 -34,6 0.77
No. 2088 Keji Road Qingshan Industrial Park Linan / Hangzhou / Zhejiang Gobolka Shiinaha